रामदेवका मुख्य सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई कसले खुवायो विष ? - Everest Dainik - News from Nepal
रामदेवका मुख्य सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई कसले खुवायो विष ?
काठमाडौं । गतसाता अचानक अस्वस्थ भएका भारतस्थित पतञ्जली गोगपीठका प्रभावशाली व्यक्ति आचार्य बालकृष्णलाई कसैले विष खुवाएको खुलासा भएको छ ।
नेपालको स्याङ्जामा जन्मिएका आचार्य भारतका प्रभावशाली योग गुरु रामदेवको मुख्य सहयोगी छन् । पथल्जली योगपीठ नेपालमा पनि सक्रिय छ । आचार्य अस्वस्थ भएपछि नेपालस्थित पतञ्जलीका अधिकारी अहिले भारतको हरिद्वार पुगेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस बालकृष्णलाई आफ्नै कर्मचारीले विष खुवाएको खुलासा
कृष्ण जन्माष्टीको दिन भक्तले उपलब्ध गराएको प्रसाद (पेडा) खाँदा उनी अचानक विरामी परेका थिए । अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार देखिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
ट्याग्स: आचार्य बालकृष्ण, विष